गौरादह बजार व्यवस्थित र आकर्षक बनाउन शुरु । – सप्तरंगी एफ एम
Home / ताजा समाचार / गौरादह बजार व्यवस्थित र आकर्षक बनाउन शुरु ।
गौरादह बजार व्यवस्थित र आकर्षक बनाउन शुरु ।
सप्तरङ्गी एफ.एम./२८ जेठ दमक
हप्तामा दुई दिन बजार लाग्ने झापाको पुरानो बजार गौरादहलाई व्यवस्थित र आकर्षक बनाउन शुरु गरिएको छ । यसका लागि नगरपालिकाले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएर बजार निर्माणको काम थालेको हो ।
गौरादह नगरपालिका वडा नं. १ मा पर्ने मुख्य बजार बढ्दो जनघनत्वसंगै अव्यवस्थित र साँघुरो हुन थाले पछि व्यवस्थित बनाउने कार्य थालिएको नगर प्रमुख रोहितकुमार शाहले बताउनु भयो । बजार साप्ताहिक रुपमा आइतबार र बिहीबार लाग्ने गरेको छ । बजारमा व्यवस्थित टहराका ब्लक, ड्रेन, पार्क, आकर्षक पानीका फोहोरा, गार्डेन, पार्किङ, पुस्तकालय लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्ने गरी डीपीआर तयार पारेको नगरपालिकाका सब इन्जिनियर प्रेम बास्तोलाले जानकारी दिनुभयो ।
बजार निर्माणमा कुल दुई करोड २० लाख हाराहारीमा खर्च लाग्ने गौरादह बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खड्गराज थापाले बताउनु भयो । बजारमा व्यापारीका लागि पसल राख्न व्यवस्थित १३ वटा टहराका ब्लक निर्माण गरिने छ । टहरा निर्माणमा एक करोड ४४ लाख १७ हजार २ सय ७१ रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ । बजार क्षेत्रको चारैतिर ढल व्यवस्थापन हुने गरी ड्रेन निर्माण गरिने छ । डे«नका लागि ३२ लाख ३९ हजार ५ सय २० रुपैयाँ को स्टिमेट गरिएको छ ।
डीपीआरअनुसार थोक बजार, खुद्रा बजार, मासु, माछा, फेन्सी बजारलाई व्यवस्थित गरिने छ । बजार निर्माणका लागि गौरादह बजार व्यवस्थापन समितिले केही समयअघि बजार क्षेत्रमा रहेका रुखहरु काटेको छ । बजार निर्माणको काम सुरु गरेको वडा नं. १ का वडाध्यक्ष नगेन्द्र भण्डारीले बताउनु भयो ।
गौरादह जिल्लाको दक्षिण पश्चिम क्षेत्रहरु गौरादह, बैगुन्धुरा, महारानीझोडा, कोहबरा, जुरोपानी, कोरोबारीको मुख्य बजार हो । गौरादह बजारमा २ हजार ४ सय दर्ता भएका व्यवसायीहरुले व्यवसाय गर्दै आएको उद्योग वाणिज्य संघ गौरादहका अध्यक्ष जिवन राईले जानकारी दिनु भयो ।
Previous: झापाको कमल गाउँपालिका बाट बेवारीसे अवस्थाका एक वृद्धको उद्धार ।
Next: एशियन लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनीले हर्जना छुट दिने ।